သင့်ရဲ့ရှုံးနိမ့်အန်းဒရွိုက်ဖုန်းကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » သင့်ရဲ့ရှုံးနိမ့်က Android Phone ကိုတစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန်ကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို
သင့်ရဲ့ရှုံးနိမ့်က Android Phone ကိုတစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန် APK ကိုရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
သင့်ရဲ့ Android device ကိုခိုးယူသို့မဟုတ်သင်တစ်နေရာရာကလွဲချော်နေသည်ဖြစ်စေ, တစ်ဦးကိုဖုန်းဆုံးရှုံးထိုကဲ့သို့သောကြောက်မက်ဘွယ်သောအတွေ့အကြုံနှင့်ရင်ဆိုင်သင့်ပါတယ်မျှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ, ကပုဂ္ဂလိကရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဘဏ်သို့မဟုတ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်, သင့်ဖုန်းတွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကနေအဆက်ပြတ်နေတဲ့နှင့်အတူသင့်ပုဂ္ဂလိကဒေတာဆုံးရှုံးတဲ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်လည်းရှိသေး၏။ ဤ blog တွင်, ငါတို့သည်သင်တို့အစဉ်အဆက်ဟာ android ဖုန်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရလျှင်သင်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ပြည့်စုံလမ်းညွှန်ဖော်ပြနေကြသည်။
သငျသညျကြောင့်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဆုံးရှုံးသော်လည်းစိုးရိမ်ထိတ်လန်ဘူး! နောက်ကျောကသင်၏ပျောက်ဟာ android ဖုန်းကိုခြေရာခံဖို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ တိုင်း Android ဖုန်း built-in ဖြစ်ပါတယ် tools တွေကိုသော့ခတ်နဲ့အလွယ်တကူသူတို့ကိုကျောကိုခြေရာခံရန်။ Google I / O သင့်ရဲ့ရှုံးနိမ့်ဖုန်းကိုချကိုခြေရာခံနှင့်သင့်ဒေတာတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရန်တချို့ features အသစ်မွေးစားခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာသင်သည်လည်းသင်၏အခြမ်းအပေါ်အချို့သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာတွင် androind phone- ဆုံးရှုံးခဲ့ရမှု၌အဘယ်အရာကိုရန်ဖြစ်ပါသည်
ပထမဦးစွာသင့်ရဲ့ Device ကိုလော့ကျွန်း
ပထမဦးဆုံးအပေါင်းတို့၏ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ယူပါ။ စကားဝှက်သို့မဟုတ်ပုံစံနှင့်အတူတစ်လက်ဗွေသော့ခတ်ထားကြ၏။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရန်နောက်ထပ်မျက်နှာသာလုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ Android device ကိုမှမကျြနှာကိုသော့ခတ် add မထားပါနဲ့။ Android ကိရိယာအများစုတွင်မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာကြောင့်အဆင့်မြင့်မဟုတ်ပါဘူးကြောင့်နေဆဲတိုးတက်မှုလိုအပ်ပါသည်။ တဦးတည်းကိုအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူဤနည်းပညာကိုလှည့်စားနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကပိုလုံခြုံမျက်နှာ authentication များကိုတရားဝင်လုံခြုံမျက်နှာ ID ကိုစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း add လို, အန်းဒရွိုက်မေးဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။
ထို့နောက်တိုင်အောင်, သင့်ရဲ့ Android device ကိုပေါ်တွင်သင်၏လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာနှင့် password ကိုအသုံးပြုပါ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ PIN ကုဒ်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါသို့မဟုတ်သင့် device ကိုသုံးစွဲဖို့အခါတိုင်းလက်ဗွေလွန်းအဆင်မပြေပုံရသည်, သင်သည်အဘယ်သူကိုမျှသင်၏အဘဏ္ဍာရေး apps များ, ဓာတ်ပုံများ, အီးမေးလ်များ, နှင့်သင့်ဖုန်းတွင်သိမ်းဆည်းထားဓါတ်ပုံတွေကိုရယူချင်ကြဘူး။ သင့်ရဲ့phoneâ€™ s ကိုလုံခြုံရေးတစ်ခုထပ်တိုးခြေလှမ်းသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုဖော်ထုတ်နေဖြင့်အလားအလာရှိသောအန္တရာယ်ရှောင်ရှားရန်မှားယွင်းတဲ့အချည်းနှီးဖြစ်၏။
အကြှနျုပျ၏ Device ကိုရှာပါကိုဖွင့်မည်
သင့် android device အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်သင်၏ Google အကောင့် login အခါတိုင်းအလိုအလျောက်ဖွင့်ထားတဲ့€ ~Find ကျွန်မရဲ့စက်ပစ္စည်းâ€™âတစ်ဦးက default အင်္ဂါရပ်လည်းမရှိ။ ကိစ္စတွင်သင့်ရဲ့ device ပျောက်ဆုံးသွားသည်ကိုသင်အဝေးမှကသော့ခတ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဒီ feature ကိုသုံးနိုင်သည်။
သင်ကငါ့စက်ကိုဖွင့်ကိုရှာပါသေချာလိုပါကရိုးရှင်းစွာ Settings ကိုသွားပါ။ ထို့နောက်လုံခြုံရေး & တည်နေရာအပိုင်းအောက်မှာကျွန်မရဲ့ Device ကိုရှာပါသွားပါ။ သင့်ရဲ့ device ကိုမလုံခြုံရေးကောင်စီ & တည်နေရာ option ကိုလည်းမရှိလြှငျသငျရိုးရှင်းစွာကို Google> လုံခြုံရေးမှာဒီ option ကိုတွေ့ပါလိမ့်မည်။
အကြှနျုပျ၏စက်ပစ္စည်း option ကိုဖွင့်ရှာပါသေချာအောင်လုပ်ပါ။ မရရှိလျှင်, ရိုးရှင်းစွာအပျေါမှာ toggle နှင့် Settings tab ကိုပိတ်ပါ။
ဤအ apps များ Download
Googleâ€™ s ကိုငါ့အ Device ကိုရှာပါ
သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့သီချင်းများ GPS တည်နေရာ
သွားလာရင်းသင့်ရဲ့ device ဖျက်ရန်
မည်သည့်နေရာတွင်သင့်ရဲ့ device ကိုသော့ခတ်
Android စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ကို support
သငျသညျAndroidâ€™်အရာရှိတဦးကဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်သို့သော်သင်€ "android.com/find â URL ကိုမှတ်မိဖို့ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ device ကိုဆုံးရှုံးတဲ့ဘေးဥပဒ်ကိုခံရသောအခါဤ website ကိုတကယ်နေရာလေးကိုလာပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကိရိယာ, နှင့်ဆက်စပ်သောတူညီ Google အကောင့်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာသေချာပါစေ။
သငျသညျသှား PC ကိုမှလျှင်, သင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် အကြှနျုပျ၏ Device ကိုရှာပါ Google Play စတိုးကနေအခြား Android ကိရိယာပေါ်မှာ app ကို။ သင်သည် app သို့မဟုတ်ထို site သို့လက်မှတ်ထိုးအခါတိုင်း Google ကချက်ချင်းသင့်ရဲ့ device ကိုနေရာချထားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာချက်ချင်းကိရိယာတစ်ခုသတိပေးချက်ပေးပို့ကြောင့်ရှိပါတယ်သူကိုခြေရာခံပါလိမ့်မယ်။
အကြှနျုပျ၏ Device ကိုဆိုဒ် (အမှု၌သင်တို့ကိုတစ်နေရာရာမှာသင့်အိမ်အတွက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုလွဲချော်), အဝေးမှသင့်ရဲ့ device ကိုသော့ခတ်သင့်ရဲ့ device ကိုဖျက်ပစ်နှင့်အသံကစားရန်လက်ဝဲ panel ကိုအပေါ်တစ်ဦး menu ကိုရှိပါတယ်ရှာပါ။
သငျသညျလုံလုံခြုံခြုံစက်ပစ္စည်း option ကို select လုပ်ပါကရိုးရိုးသင့်ရဲ့ device ကိုသော့ခတ်မည်, သော့ခတ် screen ပေါ်မှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုပြသ, ချက်ခြင်း Google အကောင့်ထဲကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့ device ကိုသော့ခတ်ရင်တောင်, သင်ဆဲသင့်ရဲ့ device ကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ device ကိုသော့ခတ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည် Google Pay ကို (သင်မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်လျှင်) ၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ်ဖျက်ရန်သင်ပြုချင်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအရာဖြစ်၏။ ဒီ feature ကိုသုံးခွငျးဖွငျ့သငျသညျအနာဂတျမှာပြန် device ကိုခြေရာခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အမှု၌သူခိုး device ကိုချွတ် switches သူတို့အပျေါမှာလှည့်နှင့် Wi-Fi သို့မဟုတ်ဆယ်လူလာကွန်နက်ရှင်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်တိုင်အောင်, ကိုခြေရာခံရန်မ option ကိုလည်းမရှိ။ သင့်ရဲ့ device ကိုတည်ရှိသည်တစ်ချိန်ကဒီနည်းလမ်းက Google ကိုချက်ချင်းအီးမေးလ်တစ်စောင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
built-in မြေပုံသင့်ကိရိယာ၏ GPS တည်နေရာခြေရာခံဖို့
သင့်ရဲ့ပျောက်ဆုံးသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးဖုန်းများပေါ်တွင် real-time updates များကို
မိသားစုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Productions တို့ကကျွန်မရဲ့ဖုန်းကိုရှာပါခိုးယူသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားက Android device ကိုခြေရာခံဖို့ကအလွန်လွယ်ကူစေသည်။ သင်အလွယ်တကူ app ကိုကနစ်မြုပ်ဖြင့်သင့်စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်မည်သည့်မိသားစုmemberâ€™ s ကိုစက်ပေါ်ရှိလမ်းကြောင်းစောင့်ရှောက်ဖို့ဒီ app ကိုသုံးနိုင်သည်။ တစ်ဦးခိုးယူသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ device ကိုဆင်းခြေရာခံသည့်အခါဒီ app တည်နေရာပေါ် Real-time updates များကိုပြသထားတယ်။ တည်နေရာအဆက်မပြတ် device ကိုရွေ့လျားအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဒါဟာအစပျောက်ကိရိယာတိကျမှုအညွှန်းပြသထားတယ်။ အစက်အပြောက်-အပေါ်တည်နေရာများကိုကြောင့်တြိဂံ algorithm ကိုအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်းဖုန်းရဲ့တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက် devices များအားလုံးအဖြစ် Real-time မြေပုံကြည့်ရှုရန်အကြှနျုပျ၏ဖုန်းက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရှာပါသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ဖုန်းလုံးဝအခမဲ့နှင့်သင့်ပျောက် device ကိုခြေရာခံများအတွက်အကောင်းဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်ရှာပါ။ သင့်ရဲ့ device ကိုတစ်ဦးrobberâ€™ s ကိုစွဲဖို့လက်ထဲသို့မဟုတ်ပြိုလဲသားကောင်သို့ရတယ်သည့်အခါတကယ့်နေရာလေးကိုလာပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့ Device ကိုခြေရာခံခြင်းပြီးနောက်သလားလော
အာမခံပြောဆိုချက်ကို File နှင့် / သို့မဟုတ်ကွန်ယက်အော်ပရေတာအကြောင်းကြား
သင်ပြန်ဝမ်းနည်းစွာသင်ချစ် device ကိုမရကြလိမ့်မည်ကြောင်းသေချာပါကခိုးယူသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရအဖြစ်သင့်ရဲ့ device သတင်းပို့နှင့်သင့် network operator မှဆက်သွယ်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းသည်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောက၎င်း၏ဒေတာဘေ့စကနေဖုန်းကိုနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်, သူခိုးမဟုတ်တော့အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အော်ပရေတာခေါ်ဆိုခြင်းအားဖြင့်, သူတို့မှာလည်းသူတို့အဖြစ်ကိုကောင်းစွာပေးခဲ့ကြသည်ဝန်ဆောင်မှုများရပ်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအခြားမည်သူမဆိုသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုသုံးပါမသွားပါစေနိုငျသောကွောငျ့သငျသညျကနှင့်အတူလိုက်သင့်တယ်။ သငျသညျကကွန်နက်ရှင်ကိုဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းအဖြစ်လုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့ဖုန်းက Wi-Fi ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မဟုတ်လျှင်သင်ကခြေရာခံနိုင်ပါလိမ့်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏စက်ပစ္စည်းတွင်အာမခံရှိပါက၎င်းသည်ကောင်းလှ၏။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာဆို file နှင့်နှုတ်ယူပြီးပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ကိုအစားထိုး device ကိုရနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအာမခံပြောဆိုချက်ကိုဖြစ်စဉ်ကိုစတင်ရန်လည်းသင့်ရဲ့ device ကိုအစားထိုးမဆိုအာမခံပေးသူကိုရည်ညွှန်းပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏ဆုံးရှုံးသွားသောဟာ android ဖုန်းရဲ့တည်နေရာကိုခြေရာခံနိုင်လျှင်, ထိုလူလိမ်ရင်ဆိုင်ရဖို့ကြိုးစားပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်, သင်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးမှမဆိုအန္တရာယ်မလိုချင်ပေမည်။ ဒါကြောင့်ဒေသခံရဲတိုင်ကြားသူတို့ကိုသင့်ရဲ့ခြေရာခံလိပ်စာပေးခြင်းဖြင့်သင့်ကိုဆုံးရှုံး device ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်အကူအညီတောငျးဖို့ သာ. ကောင်း၏။
ငါတို့သည်သင်တို့ဖုန်းပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့်သင့် device ကိုခြေရာခံများနှင့်အသည်းအသန်အိမ်ပြန်ဆောင်ခဲ့လိုသော၏ဤစိတျလှုပျရှားမှုပေါကျကှဲရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိသည်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
10 အကောင်းဆုံး ...
iPhone ကိုရှာရန် ...
အန်းဒရွိုက်ဖုန်းပျောက်ဆုံးသွားသော ပျောက်အန်းဒရွိုက်ဖုန်းကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို အန်းဒရွိုက်ဖုန်းပျောက်ဆုံးသွား